फेरी बढ्यो विष्णु माझीको रेट ! - Prahar News
फेरी बढ्यो विष्णु माझीको रेट !
पछिल्लो समय ३ लाखसम्म पारिश्रमिक डिमान्ड गर्न थालेपछि विष्णुको रेट झन् महंगिएको बजारमा चर्चा छ । हालै एक सर्जकले विष्णुलाई गीत गायनका लागि गरेको प्रस्तावमा माझीले ३ लाख पारिश्रमिक डिमान्ड गरेको बुझिएको छ ।
पछिल्लो समय केही व्यक्तिको प्रस्तावमा माझीले ३ लाखसम्म पारिश्रमिक डिमान्ड गर्ने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । एक गीतकारले भने, ‘मैले २ वटा गीतका लागि उनलाई गरेको प्रस्तावमा दुवैपटक ३ लाख भन्ने कुरा आयो । त्ययसपछि ब्याक भएँ ।’
त्यसो त हालै ‘ओर आइज प्रेम लाइदेऊ’मा माझीले २ लाख पारिश्रमिक लिएकी थिइन् । त्यस्तै पछिल्लो समय माझीले हरेकजसो गीतमा २ लाख पारिश्रमिक बुझ्दै आएको बुझिएको छ ।
हजारौं गीतमा स्वर दिइसकेकी गायिका माझीको स्वर रहेको गीत ‘सालको पात टपरी’को चर्चासँगै उनले आफ्नो पारिश्रमिक ५० हजारदेखि बढाएर १ लाख पुर्‌याएकी थिइन् ।
त्यसपछि उनले निरन्तर ५० हजारको दरमा आफ्नो पारिश्रमिक बढाउँदै गएकी छिन् । लामो समयदेखि गायन क्षेत्रमा सक्रिय गायिका माझी भने गुमनाम रूपमा गीत गाउँदै आएकी छिन् । स्वयं माझीलाई गीत गाउन दिने सर्जकले समेत माझीको अनुहार देख्न पाउँदैनन् ।
नेपालका अधिकांश गायक, गायिका तथा सजर्कहरूसँग माझी सम्पर्कविहीन हुने गरेकी छिन् । उनी १० वर्षदेखि कुनै मिडियामा अन्तर्वार्ता समेत दिएकी छैनन् । विष्णुलाई लिएर गीत रेकर्ड गराउँदै आएका सजर्कहरूले विष्णुको रेट बढेसँगै अबका दिनमा सोच्नुपर्ने बेला आएको गुनासो गरेका छन् ।
सोमवार, मंसिर ८ २०७७१२:३५:०३
सर्बाधिक रुचाईयो बद्री पङ्गेनीको ‘तिम्रो घरमा मेरी छोरी’ !
खेम सेन्चुरी र शान्त्रि श्री परियारको मिर्सि खानेलाई सार्बजनिक !
काली प्रसाद थापाको ए पापी लुटेरा सार्बजनिक !
गायक पशुपति भट्टराई र सुर्य नेपाली "डिप्लप " को ( ए कान्छा ) बोलको गित बजार मा सार्बजनिक !